असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने योगेशका सात सूत्र
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठन एकीकरणमा समस्या देखिएपछि स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले ती समस्या सम्बोधन गर्न सातबुँदे सूत्र सामाजिक सञ्जालमार्फत अगाडि सारेका छन् । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्न ढिला भइरहेको बेला एकतालाई लिएर केही तीता समाचार सार्वजनिक भएपछि आफूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो टिप्पणी सार्वजनिक गर्नुपरेको बताएका छन् ।
उनले अगाडि सारेको मापदण्डमा पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक घडीमा वरिष्ठतालाई मापदण्ड मानेर नेतृत्व चयन गरिए अहिलेको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने रोडम्यापमा प्रस्ट पारेका छन् । ‘कुनै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको छैन भने अब बन्ने एकीकृत कमिटीको अध्यक्ष उसैलाई बनाऔं । यदि अध्यक्ष जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई दिऊँ । उपाध्यक्ष पनि त्यस्तै भए सचिवलाई र सचिव पनि त्यस्तै भए उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिऊँ । पदाधिकारी सबै जनप्रतिनिधि भए सहमतिका साथ वरिष्ठ सदस्यमध्येबाट जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाऔं,’ रोडम्यापमा भनिएको छ । ‘कुनै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको छैन भने अब बन्ने एकीकृत कमिटीको अध्यक्ष उसैलाई बनाऔं । यदि अध्यक्ष जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई दिऊँ । उपाध्यक्ष पनि त्यस्तै भए सचिवलाई र सचिव पनि त्यस्तै भए उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिऊँ । पदाधिकारी सबै जनप्रतिनिधि भए सहमतिका साथ वरिष्ठ सदस्यमध्येबाट जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाऔं,’ रोडम्यापमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, उनले यो एकताको बेला जटिल र संवेदनशील बेला भएकाले यस्तो बेलामा अनावश्यक ढंगले समस्या उत्पन्न गर्नु नहुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पार्टी र सरकार माथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बेलामा सिंगो पार्टी अझ एकताबद्ध भएर त्यसको सामना गर्नुपर्नेमा पार्टीभत्र निषेध र प्रतिशोधको व्यवहारमार्फत पार्टीलाई कमजोर बनाउने हर्कतहरूलाई इतिहासले क्षमा गर्नेछैन ।’ नेता भट्टराईले अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले पार्टी एकताको घोषणासँगै सात दशक लामो प्रयत्नलाई आफ्नो कालमा सार्थक बनाएकाले अब अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आदरणीय नेताद्वय कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड ! पार्टी एकताको घोषणासँंगै सात दशक लामो प्रयत्नलाई आफ्नो कालमा सार्थक बनाउनुभयो । तपाईंहरूलाई इतिहासले सलाम गरेको छ र जुगजुगसम्म अमर हुनुहुनेछ । सायद तपाईंहरूको जिन्दगीमा योभन्दा युगान्तकारी उपलब्धि अर्को हुनेछैन । आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लाखौंलाख कार्यकर्ताहरूले तपाईंहरूबाट न्याय र समानता खोजेका छन, एउटा असल अभिाभावकको भूमिका खोजेका छन् । मेरो कठोर विश्वास छ, हजारौं चुनौती र अप्ठ्यारामाथि खरो उत्रँदै आउनुभएका तपाईंहरू आफ्नै कार्यकर्ताका यी अपेक्षामा पनि सफल बन्नुहुनेछ ।’
प्रभु बैंकले थप्यो दुई शाखा कार्यालय
मेरोे सम्झनामा रवीन्द्र
बढुवामा फेरी पनि अंगरक्षकलाई प्राथमिकता
भ्रष्टाचारीहरू दुला पस्दा पनि उही गीत किन ?
सात वर्षमा नेपालको अवस्था उस्तै
प्रहरीमा बढुवाको बाटो खुल्यो नेता समाएर फड्को हान्न कनिष्ठहरूको दौड
सरकारले काम गरेन भन्दै भ्रम सिर्जना गर्ने ?
‘जीवन काँडा कि फूल’ माथि सिनेमा
डीएसपी आचार्य उठ्तीपुठ्तीमा